I-Torchlite: Ukumaketha ngeDijithali ngeSixazululo Sokusebenzisana Komnotho | Martech Zone
I-Torchlite: Ukumaketha kwedijithali ngesixazululo sokubambisana somnotho
Okwamanje, kungenzeka ukuthi usuthole lesi sicaphuno esivela ku- UTom Goodwin, iphini likamongameli omkhulu wamasu namasu amasha eHavas Media:
I-Uber, inkampani yamatekisi enkulu kunazo zonke emhlabeni, ayinazo izimoto. I-Facebook, umnikazi wezindaba odume kakhulu emhlabeni, ayenzi okuqukethwe. U-Alibaba, umthengisi obaluleke kakhulu, akanakho okusetshenziswayo. Futhi i-Airbnb, okungumhlinzeki wezindawo zokuhlala omkhulu kunayo yonke emhlabeni, ayinazo izakhiwo.
Kukhona manje Izinkampani eziyi-17 billion-dollar kulokhu okuthiwa ukubambisana kwezomnotho. Lezi zinkampani zithole impumelelo enkulu hhayi ngokusungula umkhiqizo omusha, kepha ngokuhlela kabusha indlela yazo yokwenza leyo edala inani ngokufanisa abantu abadinga izinto nabantu abanezinto abangazinikeza. Uma kuzwakala kulula, kulungile, kungenxa yokuthi kunjalo. Kwesinye isikhathi ubuhlakani busho nje ukuqonda okusobala.
KuSusan Marshall, umakadebona ongumakad ’ebona, kwacaca ukuthi lolu hlobo lokucabanga — ukudala ukuxhumana okuhambisanayo ngokuphelele — bekungeke kusize nje embonini yezentengiso, kuzodingeka.
Abathengisi sebejwayele ukusho ukuthi ezobuchwepheshe zilinganise inkundla yokudlala; lelo bhizinisi elincane neliphakathi manje selinamathuluzi okuncintisana namajuggernauts. Ngokwenzayo, akulula kangako. Yize amathuluzi wokumaketha edijithali engcono futhi etholakala kabanzi kunanini ngaphambili, izinkampani zisadinga ochwepheshe abakwaziyo ukusebenzisa lawo mathuluzi ukuthola imiphumela emihle kakhulu. Sesifikile iphuzu lapho ochwepheshe bezokumaketha bengasakwazi ukuhambisana nesimo sendawo esiguqukayo sedijithali. Kuthatha ongoti, futhi kumabhizinisi amaningi, labo ngoti kungenzeka kube nzima ukuthola.
Ukufanisa kangcono amabhizinisi afuna ubuchwepheshe bokumaketha nochwepheshe abawadingayo, uMarshall udale Isibani - isisombululo somnotho esisebenzisanayo esinikeza noma yiliphi ibhizinisi ikhono lokwakha iqembu elikhethekile lokumaketha. Ngendlela yayo yokulwa nama-ejensi, iTorchlite inikeza amabhizinisi indawo yezimakethe efunwayo ebenza bakwazi ukuthinta inethiwekhi enkulu yochwepheshe bezentengiso ngabanye ukuhlela nokwenza imikhankaso yedijithali.
Uchwepheshe ngamunye, noma Isibani, ikhethwa ngokuya ngezidingo ezithile zebhizinisi. Ufuna ukushayela ithrafikhi eningi kuwebhusayithi yakho? I-Torchlite izokufanisa nochwepheshe we-SEO onolwazi embonini yakho ukuqinisekisa ukuthi isayithi lakho lilungiselelwe futhi amakhasimende akho angakuthola.
I-Torchlite inikeza amabhizinisi enye indlela yokuqasha abasebenzi abengeziwe abasebenza ngaphakathi endlini noma ama-ejensi angaphandle. Qhathanisa amanani abo nezinga lehora le-ejensi noma izindleko zokuqasha abasebenza ngaphakathi endlini ($ 50,000 kumphathi wezokuxhumana, $ 85,000 kumthengisi we-imeyili, $ 65,000 we-SEO / Web specialist), futhi ungabona ukuthi kungaba kanjani izinzuzo zezimali.
Isibani futhi inika amandla amabhizinisi ukugcina isitaki sabo sobuchwepheshe bokumaketha esivele sikhona. Ukuba nokufinyelela kuyo yonke imakethe yochwepheshe abanobuchwepheshe besebenzisa cishe wonke amathuluzi wokumaketha edijithali kusho ukuthi amabhizinisi akudingeki ukuthi aklebhule futhi abuyisele ubuchwepheshe bawo obukhona.
Amabhizinisi asebenzisa iTorchlite nawo anenketho yoku Vula, SHINTSHA or Vala amaqhinga noma izinhlelo ezithile zokuthengisa eziku-inthanethi nganoma yisiphi isikhathi. Uma ukumaketha nge-imeyili, ngokwesibonelo, kukhombisa ukuthi kungcono kakhulu ekuguqulweni kokushayela ngenkathi amanye amaqhinga engasebenzi kahle, amabhizinisi akhululekile ukushintsha ukugxila kwawo futhi abeke kalula izinsiza zawo. ITorchlite ilawula yonke le nqubo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, okusho ukuthi abanikazi bamabhizinisi akumele bakhathazeke ngokuqasha, ukuphatha noma ukukhipha ithalente elengeziwe.
Ukusiza abanikazi bamabhizinisi ukulandelela ukuthi iTorchliters yabo isebenza ini, iTorchlite inika wonke amaklayenti umphathi we-akhawunti ozinikele kanye nokufinyelela kudeshibhodi eku-inthanethi. Ngokusebenzisa ideshibhodi yeTorchlite, amaklayenti abonakala ngokuphelele ukuqapha inqubekela phambili, ukubuka imisebenzi ehleliwe, ukuvumela okuqukethwe nokulandela ukuthi kusondele kangakanani ukufinyelela izinhloso zabo zokumaketha.
Unentshisekelo ekuzameni iTorchlite?
Bhalisela idemo yesikhulumi sokuqala seTorchlite namuhla!
Tags: ngokubambisanaizinsiza zokuthengisaubuchwepheshe bokumakethaisisetshenziswaisibaniisibani